Horusocod ayaa noo Haboon... - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Horusocod ayaa noo Haboon…
February 5, 2017 admin531
Maalmo badan oo la sugayey hadda waxaan kaabiga ku heynaa 8 Feberaayo oo la asteeyey doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kursigan isku diiwaangaliyey in ay u tartamaan 24 rag ah, inkastoo uu shalay ka tanaasulay mid kamid ah.
Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isugu jira musharixiin horey xilal usoo qabtay iyo kuwo cusub oo u hanqal taagaya in mar uun kursiga Madaxtinimo ku fadhiistaan, sidoo kale musharixiinta qaar ayey ka tahay caan bixid ama in jago laga siiyo dowladaha soo socda.
Musharixiinta horey usoo shaqeysay way ka rajo badan yihiin kuwa kale, inkastoo qaarkood aysan waxmuuqda soo kordhin xiligii ay talada hayeen.
Inkasta oo aysan shacabku dooraneyn Madaxweynaha, hadana wax ay talo iyo tusaale ku biirin karaan mudanayaasha labada aqal golaha Shacabka iyo aqalka sare.
Waxaana xildhibaanada laga sugayaa in ay danta guud ilaaliyaan, waayo qofka ay doortaan ayaa hogaamin doonna dalka 4 sano ee soo socota, waxaana suurtagal hadii aad ku doorato caadifad wax ay u badan tahay in aad ka shaleyso beri, maalintaas oo aadan waxba ka badali karin.
Dooro mustaqbalka oo ka fiirso halka aad codkaaga dhigeyso, dhaammaan musharixiintu waa muwaadiniin u qalma in la doorto, balse way kala mudan yihiin, Soomaaliya maanta wax ay u baahan tahay horusocod iyo in markale fursad la siiyo Murashax Xasan Sheekh Maxamuud, si uu u dhameystiro howlaha qabyada ah, dalkeenu maanta uma baahna nin cusub oo waqti badan uga dhumo la qabsiga howlaha dowladda, waxaa na sugaya waddo dheer oo dib u kabashada dalka loo marayo, waxayna nooga baahan tahay mudane howsha la socda, dhaqsina noo gaarsiiya horumarka.
Haddii Musharax Xasan Sheekh Maxamuud la doorto waxaan sugnaaba waa isaga oo nooga faa’iideeya waqtiga, casharadii uu 4 sano ka bartayna ka faa’iideysta. Soomaaliya Horusocod ayay u baahan tahay.
Golaha Shacabka oo maanta cod u qaadaya miisaaniyada dowladda ee 2018